पूर्वयुवराज पारस शाहले आफ्नै क्यारिकेचर हेरेपछि खु:शिले गदगद, भरतमणीलाई यसो भने हेर्नुस ! – Ap Nepal
पूर्वयुवराज पारस शाहले आफ्नै क्यारिकेचर हेरेपछि खु:शिले गदगद, भरतमणीलाई यसो भने हेर्नुस !
September 2, 2021 717
भरतमणि कमेडीको फुल डोज पस्किन सक्छन् । उनको प्रस्तुतिमा विविधता भेटिन्छ । कमेडी च्याम्पियन जिते पनि वा नजिते पनि उनी लामो रेसका घोडा हुन् । भोलीका दिन नेपाली रंगमञ्चमा छाउन सक्ने सम्भावना बोकेका कलाकार हुन् उनी .अनलाईनमार्गबाट।
Prev१४ वर्षको सानै उमेरमा बिहे गरेर, श्रीमानले छोडे पछि काखे बालक छोडी बिदेसिनु पर्‍यो यसरी पि:डा सुनाउदै-हेर्नुहोस् (भिडियो सहित )
Nextकोरोना अपडेटः आज थप २ हजार ४ जनामा कोरोना संक्र मण पुष्टि, १६ जनाको मृत्यु…
अब ३-३ महिनामा बाँडिने सामाजिक सुरक्षा भत्ताको नयाँ दर सार्वजनिक (सूचीसहित)
आहा ! जेठी श्रीमतीले नै श्री, मानलाई कान्छी खो जेर श्रीमान् कै विहेमा यसरी रमाइन्-हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)